Golaha Wasiirrada Ingiriiska Oo Isku Afgartay Go’aan Ka Dhan Ah Suuriya | Haqabtire News
Golaha Wasiirrada Ingiriiska Oo Isku Afgartay Go’aan Ka Dhan Ah Suuriya
April 14, 2018 - Written by Warbaahinta Haqabtire
London:-(HTN) Golaha wasiirrada ee Britain ayaa isku afgartay “sida loogu baahan yahay in tallaabo laga qaado” Suuriya si looga hor istaago in ay sii wado isticmaalka hubka kiimikada ah”, sida uu shaaciyay xafiiska ra’iisulwasaaraha Britain.
Wasiirrada oo ka qaybgalay kulanka gollaha wasiirrada ayaa sheegay “in ay aad ugu badan tahay” in xukuumadda Bashaar Al-Asad ay ka dambaysay weerarka looga shakisan yahay in hubka kiimikada ah loo adeegsaday.
Waxay ku heshiiyeen “in aan la isaga harin” hubka kiimikada ah ee la adeegsaday iyadoo aan tallaabo la qaadin.
Laakiin wasiirka gaadiidka Jo Johnson ayaa mar dambe carabka ku adkeeyay “in aysan jirin go’aan lagu gaaray hadda in tallaabo milatari la qaado.
Goolaha wasiirradu ma aysan soo hadal qaadin qorshe milatari oo ay ku lug leedahay dawladda UK oo ka dhan ah Suuriya.
Britain oo ay ‘ka go’an tahay’ difaaca Yurub
Britain oo mamnuucaysa waxyaabaha laga xardho foolmaroodiga
Wasiir oo marti u ahaa BBC-da ayaa yiri “waxaan carrabka ku adkaynayaa in aysan jirin go’aan la gaaray oo ku saabsan in ficil la qaado.
Ilo caafimaad ayaa sheegay in tobannaan ruux oo ay carruur ka mid yihiin ay ku dhinteen weerar kiimo loo adeegsaday oo ka dhacay magaalad Duuma oo ay horray u haysteen jabhaduhu, taas oo dhacda Galbeedka Ghouta.